Last nohavaozina: Mey. 26 2018 | 2 min namaky
Nanoroka dia fihetsika ny fifandraisana akaiky sy rehefa nanao tsara sy ny olona tsara, dia mety hitarika ho amin'ny tratrany-fivelivelesan-javatra, valanoranom-nandatsaka ody. Na Mety ho toa mampatahotra, tsy izany. Amin'ny fanarahana io dingana mora-by-dingana mpitari-dalana, Tsy ho ela dia ho eo amin'ny fomba nahita afomanga.
Dingana 1: Manomboha Kiss
Fotoana dia ny zavatra rehetra. By nandatsaka an-kolaka hamantatra izany, afaka hahazo nanoroka tsy nivoaka ka nanao hoe: izany. Serasera fa oroka Mety ho tafiditra amin'izany: fohifohy ho tratra ny daty nijery ny molony, nisokatra kely ny molotrao, mitsiky manaikitra molotra tsindraindray rehefa ao an-daty ary mibanjina ny maso, na ny fanaovana ny vavanao kissable amin'ny molotra gloss / toko minty tapa-kazo sy ny fofonaina vaovao. Mazava ho azy, Rehefa nomba ny namany nandritra ny fotoana kelikely, famantarana sy ny fihetseham-po hafa dia hanampy anao hahalala ny fotoana ny fotoana dia ny hanoroka azy ireo.
Dingana 2: Fametrahana ny Mood
Mitongilana any fa na dia ny oroka no sexier rehefa omena fiderana. Ka nanao hoe: “ianao dia tsara tarehy / tsara tarehy” amin'ny fomba akaiky dia afaka manampy Amp ny fitiavany. Amin'ny alalan'ny fampidinana ny boky sy ny feo ny feonao rehefa nanidy izany dia milaza ny daty maso fa manana fihetseham-po lalina ho azy ireo raha mbola Mamitaka azy ireo koa nifindra akaiky kokoa anao.
Dingana 3: Nandika ny nanoroka Barrier
Na izany no oroka voalohany, oroka voalohany amin'ny mpiara-miasa vaovao, na dia somary sahiran-tsaina ianao ny nanoroka, nandika ny nanoroka sakana dia tsy hanampy mampitony ireo selam-pitatitra, fa izany dia maneho ny tantaram-pitiavana fikasana. Raha tokony handeha ao amin'ny oroka lehibe, hiantehitra amin'ny ho avy namihina sy nanoroka ny takolako ny daty. Ny fanalahidin'ny dingana io dia fametrahana. Hahatonga ny fihetseham-po sy ny fikasany mazava tsara amin'ny alalan'ny fametrahana ny oroka akaiky ny sofina na ny vava raha maharitra segondra vitsivitsy. Mibitsibitsika zavatra flirty an-sofiny molotrao raha miresaka ela dia fomba iray hafa mba hanampiana handrava ny MIFANOROKA sakana.
Dingana 4: Mandeha ao amin'ny Kiss
Ataovy tsotra ny oroka. Be loatra ny filan'ny nofo amin'ny oroka voalohany dia afaka ny ho anjara-eny. Amin'ny molotrao moramora nisaraka, na mamboly ny oroka mivantana na manidy moramora molotra amin'ny daty. Ao amin'io dingana, dia zava-dehibe ihany koa ny manaraka ny daty mitarika. Tandremo ny fomba mamaly ny daty sy mihetsiketsika mandritra ny oroka. Raha miankina amin'ny na miresaka ela, dia mety ho afaka hifindra any amin'ny oroka mafana kokoa. Raha tsy, hifarana ny oroka amin'ny mitarika indray, nanazava ny masonao mba masony, ary mitsikitsiky.
Dingana 5: Post-Kiss Bliss
Izany no dingana honeymoon ny dingana MIFANOROKA. Raha nahafinaritra anao ny oroka mampiseho ny mpiara-miasa amin'ny alalan'ny tanana sy mitsikitsiky Nihazonako. Raha toa ianao ka mandeha any mitohy MIFANOROKA, ho azo antoka ny fifandraisana ara-batana foana ny. Azonao atao koa ny mifamadika izy ambony ny MIFANOROKA fomba hanatonana amin'ny alalan'ny zoro, hafainganam-pandeha sy ny lavany oroka, hanoroka hentitra sy ny hamafin'ny, ary ny molotra toerany. Raha toa ianao ka nanao nanoroka nandritra ny fotoana kelikely, mijery fotsiny ho samy ny masony ary mankafy ny fotoana.
Raha izany no enga anie ny voalohany amin 'ireo oroka ho anao sy ny daty, zava-dehibe ny revel eo amin'ny fihetseham-pon'ny fotoana ity. Aoka ny twinkle Sparkle eo imasonao, mitsiky foana, ary manaiky ho amin'ny “ianao an-tampon'ny izao tontolo izao” fihetseham-po.
Lehibe ny zava-miafina Kiss
Nanoroka Mahafinaritra ary rehefa nanao izay mahitsy, pitik'afo dia hanidina sy tianareo…
Ahoana no hanoroka Via Zodiaka Sign
Ny oroka voalohany amin'ny olona iray ianao dia iray amin'ireo fotoana lehibe indrindra ao amin'ny…
Tsy azo ihodivirana ny fifandraisana mpivady tojo entina mankatoa teny an-dalana, na ry zareo vao mampiaraka na hankalaza am-polo taona…
© Copyright 2018 Date My Pet. Nataon- amin'ny 8celerate Studio